Erdogan oo si adag uga hadlay aflagaado loo geystay qoyskiisa
ANKARA, Turkey – Madaxweynaha Turkiga ayaa wacad ku maray in la xoojinayo xakameynta dowladda ee baraha bulshada markii Twitter lagu aflagaadeeyay gabadhiisa iyo soddogiisa oo cunugii 4aad uu u dhashay.
Shir dhanka telefoonka ah oo uu la yeeshay hogaamiyeyaasha gobolada ee xisbigiisa ayuu kaga hanjabay sharci cusub oo soo baxaya dhamaadka sanadkan si loosoo afjaro "akhlaaq darada baraha bulshadda".
"Ma fahamsan tihiin sababta aan uga soo horjeedno baraha bulshadda sidda YouTube, Twitter iyo Netflix? Waa in la ciribtiro akhlaaq daradaas," ayuu u sheegay xubnaha xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka.
Dowladiisa ayuu ka dhawaajiyey in ay soo saareyso sharci, kaas oo ku qasbaya shirkadaha in ay joogitaan sharci ah ku yeeshaan Turkiga. Tani ayaa la macno ah in dhaqaale iyo sharci ahaan lala xisaabtami doono.
Berat Albayrak, wasiirka maaliyadda oo ay u dhaxdo gabadha Erdogan ee Esra, ayaa Khamiistii bartooda shaqsiga ah ee mareegaha Twitter-ka ku shaaciyey cunugooda 4aad oo loo bixiyey magaca Hamza Salih.
"Ku xadgudubka dhalaan"
Shaacinta waxaa xigay fariimo aflagaado ah loona mariyey baraha bulshadda kuwaasoo su'aal lagu geliyey aabanimada Albayrak.
Erdogan ayaa xusay in ay baaritaan ku socoto kuwa "ku weeraray" qoyskiisa "iyagoo ku xadgudubyada Ubadka dhowaan dhashay".
Hogaamiyaha oo ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshadda ee xarumahooda ku yaalaan dalalka reer Galbeedka in ay "iska indha-tiraan" xadgudubyada Turkiga ayaa tibaaxay in ay kula xisaabtami doono arrintaas.
Suleyman Soylu, wasiirka arrimaha gudaha Turkiga, ayaa xaqiijiyey in hawada laga saarey ciwaano badan oo qoraalo aflagaado ah baahiyey.
Turkiga ayaa kamid ah wadamadda caalamka ee sidda adag ula tacaala baraha bulshadda, inkasta oo dowladda Recep Tayyip Erdogan ay dhankeeda u adeegsato in ay ku difaacdo barnaamijyadeeda dhinaca siyaasadda.
Erdoğan iyo Putin oo wada hadal telefoonka ah yeeshay
Caalamka 10.11.2019. 15:55
Qodobadda ay kawada hadleen madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushka ayaa daaha laga rogay.
Erdogan oo shuruud ku xiray in ciidamada Turkiga ka baxaan Suuriya
Caalamka 10.11.2019. 11:29
Haweenay loo xukumay in ay "aflagaadeysay" Erdogan
Caalamka 07.09.2019. 01:25
Badmaaxiyiin u dhashay Turkiga kuna xirnaa Eritrea oo lasii daayey
Afrika 20.06.2020. 17:25
Turkiga oo lala xiriiriyey xasiloonida darada iyo argagixisada Soomaaliya
Soomaliya 15.02.2020. 07:55
Turkiga iyo Itoobiya oo ka shiray wadahadalka DF iyo Somaliland
Somaliland 08.12.2019. 07:57